FAQs - soosaaray JL Co., Ltd
All oo ku saabsan waxyaabaha our:
Waa maxay saamaynta ee u yeela warshad, gaar ahaan daawooyinka kiimikada marka la barbar dhigo?
doodii Plant waxaa dabiici ah laga soo dhirta, ay u shaqeeyaan. Laakiin, waxaan laga yaabaa in aan si fudud inay is barbar dhigaan saamayn u dhexeeya u yeela warshad iyo dawooyinka kiimikada, sababtoo ah hab ay of tallaabo aan waa isku mid. In kasta oo dhirta Qeybaha kale oo ay leeyihiin qaar ka mid ah hawlaha caadiga ah, dhirta u yeela sida caadiga ah loo isticmaalo supplements, waxa aan la beddeli karaan daawooyinka kiimikada. Warshad Aqlabiyadda u yeela waa la lahayn kooxda saamayn.
Annagu ma heli karno wax soo saarka ee aan rabno in wax soo saarka Category, waxa habboon in aan sameeyo?
Waxaan diiradda saaraan u yeela warshad ee labada kooxood,
Group B: Plant u yeela waayo Botanical Cayayaanka & Bactericide (Phytogenous) Our saarka Waayo aragnimo iyo R & D kooxda horumariyo oo la qorsheeyo waxyaabaha ee sooca ah kaas oo ku haboon yihiin Feed iyo cayayaanka.
PPM macnaheedu: Qaybo per Million, PPB macnaheedu: Qaybo per Billion
soosaaray dhirta ma leeyahay dareeraha haraaga ah?
Waxay ku xidhan tahay. Waxaan inta badan biyaha iyo khamriga la cuni karo isticmaalaan sida dareeraha, inta badan u yeela warshad waa la lahayn haraaga kale dareeraha.
dhaqmaadka processing saaraha caadiga ah, waxaan helay dad badan oo waayo-aragnimo wax soo saarka sanadkii boqolaal alaabta. Sida laga soo xigtay baahida macaamiisha ee, waxaan soo saari kartaa in size walxaha ka 60 mesh 200 mesh, hoggaansamaan Heerka dhoofinta, ka hor tago kala bixiyc la cuni karo iyo officinal.
Waayo, Feed & Veterinary Drug
Oo dhan yeela botanical waxaa la soo saaray ee speicification iyo tayada kuwaas oo qaab qiimaha wanaagsan ee feed, Waxaan sidoo kale sii heerka tayada la mid ah sida fasalka Cuntada, iyo alaabta yihiin oo waafaqsan sharciga Feed Yurub, hoggaansamaan Fami QS standard.All botanical ah doodii waxaa loo isticmaalaa sida additiive feed iyo cuntada xayawaanka, iwm
Waayo, Kiimikada Botanical & Bactericide (Phytogenous)
Ka dib markii sannado badan "cilmi, wax soo saarka iyo iibka, Waxaan horumariyo oo loogu tala galay doodii botanical in caddaymaha la filaayo iyo tayo, kaas oo ku haboon yihiin in ay ku habboon tahay in cayayaanka iyo Bactericide. dhamaan waxyaabaha ku qoran ayaa iminka ku jira codsiga.
Waxaan inta badan diiradda lagu saaray Qoondaynta saddex Product, iyagu waa
> Waayo, Kiimikada Botanical & Bactericide (Phytogenous)
> Waayo, Feed & Veterinary Drug
> Qudaar iyo Fruit Powder
All oo ku saabsan Nidaamka kontoroolka Tayada waxay:
Sida aynu ka heli kartaa baarka free imtixaanka shaybaarka ka Jieliang soosaaray?
Waxaan aad ugu faraxsanahay in aan ku siin macaamiisha la baarka free 5G-20g imtixaanka shaybaarka, oo ay la socdaan COA asalka ah, Fadlan nala soo xiriir si aad wax welwel ah.
waxaad na siin kartaa kaalmo design formula?
Haa, waxaan samayn lahayn. ma siin oo kaliya Botanic / Plant yeela, laakiin sidoo kale waxaan bixinaa adeegyo design formula, wax soo saarka heshiis iyo maaddooyinka codsiyada xal.
macaamiisha ka heli karto credit ka Jieliang soosaaray?
macaamiisha ku celiyaan Welcome la record lacag fiican si aad u dalbato credit.
Fadlan nala soo xiriir si foomka codsiga amaahda.
hat waa-faa'iideystayaasha lacagta marka aan lacag
T / T iyo / L C: Hebei Jieliang soosaaray BRICK Co., Ltd
Bank of China warsan jirin. 101342734265.
Western Union, Mr. Lijianjun
kale oo kasta oo aan la aqbali karin.
Sidee baan ku bixin kartaa amar wixii ii baxay?
Waa maxay MOQ (tiro si Ugu Yar) Si?
Shixnadaha by Air: MOQ waa 45kg per shixnad.
Shipping Badda: MOQ waa 25kg per shixnad.
(Waxay ku xiran tahay waxa wax soo saarka sidoo kale, fadlan nala soo xiriir wixii faahfaahin ah).
Waxaan ahay shirkad aan shaqsi ahaan. Waxaan ka iibsan kartaa Plant soo saaro?
Sorry, innagu waxaynu nahay in B2B. kaliya Currently waxaan siin alaabta ceeriin bulk si saarayaasha cayayaanka iyo feed bio iyo distributors aqoon, ma aha in shaqsi.
Sidee baan u dhigi karto amarada haddii aan aqoon u leh oo caalami ah laga keeno ma ihi?
Waxaan leeyahay kooxda habkii ay u yiqiin hawlgallada shixnad caalamiga ah. Waxaana lagu siinayaa yaabaa FOB, CIF, albaabka albaabka adeegga (marka la eego DDU / DDP) ee amarada aad dalalka qaar ka mid ah, waxay ku xiran tahay.
Maxaa saddexaad kormeerka xisbiga aadan Jieliang soosaaray shaqo la?
Waxa kale oo aanu la kormeerka saddexaad xisbiga shaqeeyaan, sida SGS, Shiinaha Inspection Bureau, Function Shiinaha Resource Plant National Engineering Center, iwm
Kasta oo caddeyn kale oo tayo leh wax soo saarka nidaamka maareynta?
Waxaan shahaado by ISO9001 iyo Fami-QS.
Waa maxay nidaamkeena alaabta tayada?
Sida laga soo xigtay nidaamka maamulka ISO ah, alaab kasta Dufcaddii waa in la baaro inta lagu guda jiro habka wax soo saarka iyo ka hor bixinta kooxda QC si aad u hubiso of awoodba sheyga, khayroon daahirnimo iyo macluumaad kale oo loo baahan yahay.
All oo ku saabsan habkii ay u:
Sidee xirxirida ah?
xirxirida Sample: bacaha caagga ah Double gudaha, bac-bireed aluminium ka baxsan,
xirxirida bulk mid: bacaha caagga ah double gudaha, warqad fuusto ka baxsan, 20kg-25kg / durbaanka.
xirxirida bulk laba: bacaha 1kg-5kgs caag gudaha kolay aliminiyum ka baxsan, xirxiraan in warqad fuusto, 20kg-25kgs / durbaanka.
Jumlada xirxirida saddex: 25kgs, 50kgs, 100kgs iyo 200kgs, caaga Drum.
Sidee dheer waa markii gaarsiinta?
Shixnadaha waqti by weel: 1 ilaa 2 isbuuc ah, sida ay u dekedaha caga kala duwan.
Shixnadaha waqti by hawada: 2 ilaa 6 maalmood oo shaqo.
Sidee ku saabsan gaadiidka? Waa maxay waxa aad dekedaha maraakiibta caadiga ah?
adeegyada Courier International oo Freight Services gudbinta labadaba waa laga heli karaa.
By raridda Badda: Tianjin, Shanghai
By shixnad Air: Beijing, Shanghai